Ọkwa Math SEO WordPress ngwa mgbakwunye bụ Amazing! | Martech Zone
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-enweta WordPress na ihe ọ bụla na-ele anya na anyị na-ele anya na-eji Yoast's WordPress SEO ngwa mgbakwunye iji jikwaa isi ihe maka njikarịcha search engine. E wezụga ngwa mgbakwunye n'efu, Yoast na-enye ọtụtụ plugins ọpụrụiche.
Achọpụtala m ngwa mgbakwunye SEO nke SEO dị ezigbo mma, mana enwere peeves ole na ole m nwere:
Ogige nhazi Yoast SEO nwere ahụmịhe nke ya nke dị iche na ahụmịhe onye ọrụ ndabara nke WordPress.
Yoast na-achọ mgbe niile ka ndị folks gbanwee gaa na otu ma ọ bụ karịa na plugins ha akwụ ụgwọ. Hey… ha nyere nnukwu ngwa mgbakwunye na-akwụghị ụgwọ ọ bụla, yabụ achọrọ m ịhụ ka ha na-eweta onyinye ahụ. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ọ na - abụ naanị ntakịrị ihe n’uche m.
The Yoast ngwa mgbakwunye chọrọ ezigbo ego ma na-ebelata ebe nrụọrụ m.
Anyị maara - site na iji ekwentị na ịchọ ihe dị oke egwu - na ị nwere ike ida ọtụtụ narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku ndị ọbịa ma ọ bụrụ na oge iwe gị na-adị nwayọ karịa onye na-asọmpi gị… yabụ ọsọ bụ okwu dị oke mkpa nye m.
Ọkwa Math WordPress SEO ngwa mgbakwunye
Enyi m, Lorraine Ball, kwuru nke a Ọkwa Math SEO ngwa mgbakwunye na m ga -anwale ya ozugbo. Ụlọ ọrụ Lorraine, GburugburuNa-ewu saịtị WordPress mara mma ma dịkwa ọnụ maka ọtụtụ ndị ahịa. Enwere m mmasị n'otu ntabi anya ịnwale ngwa mgbakwunye ahụ ma bulie ya gafee ọtụtụ saịtị iji hụ ka esi arụ ọrụ ọfụma.
Ọkachamara iji gbanwee site na Yoast SEO Plugin to Rank Math dị mfe. Uru ọzọ nke ngwa mgbakwunye bụ na ị nwekwara ike ibubata ma chịkwaa rediregharị saịtị gị. Achọrọ m ka ha nye otu dị iche iche iji hazie redirere gị, mana ịbelata ọnụ ọgụgụ nke plugins kwesịrị ọnwụ nke njirimara ahụ.
Enwere m ekele maka nchịkọta ọdịnaya nke Math, nke dị mma maka SEO novices ide ma melite ọdịnaya maka isiokwu ndị ha nwere ike ịche:
Ọkwa Math Uru na Akụkụ
Mfe Soro Mbido Ọkachamara - Ọkwa Math fọrọ configures onwe ya. Ọnọdụ Math na-egosipụta nhazi usoro na nhazi ọkachamara nke setịpụrụ SEO maka WordPress n'ụzọ zuru oke. N'elu echichi, Rank Math verifies gị na saịtị nke ntọala na-atụ aro ndị ezigbo ntọala maka kasị mma arụmọrụ. Nzọụkwụ-site-nzọụkwụ wizard na-edozi ntọala SEO gị, profaịlụ mmekọrịta, profaịlụ webmaster, na ntọala SEO ndị ọzọ.
Ntuziaka Dị Mfe & Dị Mfe - Rank Math e mere na-ewetara gị nri ọmụma gị n'oge kwesịrị ekwesị. Ihe dị mfe, ma dị ike onye ọrụ na-egosipụta ozi dị mkpa gbasara post gị n'akụkụ post ya. Iji ozi a, ị nwere ike imeziwanye post gị SEO ozugbo. Nchịkọta Ọnọdụ na-egosipụtakwa ihe nlele dị elu. Nwere ike ihuchalụ etu post gị ga-esi pụta na SERPs, lelee snippets bara ụba, ọbụnakwa hụchalụ etu post gị ga-adị mgbe ị na-akọrọ na mgbasa ozi mmekọrịta
Nhazi Modular - Jiri naanị ihe ịchọrọ ma gbanyụọ ndị ọzọ. Ejiri usoro modular rụọ Math Math ka inwee ike ịchịkwa weebụsaịtị gị. Gbanyụọ ma ọ bụ gbanye modulu oge ọ bụla ịchọrọ ha.
Koodu Kachasị maka Ọsọ - Anyị dere koodu site na ncha ma hụ na akara ọ bụla nke koodu nwere nzube. Anyị etinyela ọtụtụ afọ na nke a ka ngwa mgbakwunye ahụ dị ngwa ngwa ka enwere ike.
Ndị mmadụ kere yaNa MyThemeShop kere - Na Rank Math, ị maara na ị nọ mma aka. Ingmeba na ichekwa pọtụfoliyo nke ngwaahịa 150 + WordPress kụziiri anyị otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara ịmekwu mgbakwunye. Na, anyị awụkwasịwo ihe ọmụma anyị niile na nzuzo Rank Math.
Industrylọ ọrụ na-eduga Nkwado - Anyị na-elekọta nke anyị. Agaghị ahapụ gị elu ma kpọọ nkụ mgbe i jiri Rank Math. Anyị na-enye oge ntụgharị ọsọ ọsọ maka ajụjụ nkwado ma dozie nchinchi ọsọ ọsọ karịa ka ịchọta ha.
Emelitere m ndepụta nkwanye m WordPress plugins maka azụmahịa na Rank Math dị ka onye nnọchi nke Yoast na Redirection. Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ uru ọ bara.
Gaa Leta Math
Tags: nyocha ọdịnayaKeywordsná mgbakọ na mwepụseo ngwa mgbakwunyeSitemapswordpress pluginxml saịtị saịtịyoast